ब्रेकअपको झोंकमा शोसल मिडियाको दुरुपयोग | सुदुरपश्चिम खबर
ब्रेकअपको झोंकमा शोसल मिडियाको दुरुपयोग
प्रेममा परेको व्यक्तिलाई यो संसार नै रमाइलो लाग्छ । सबैतिर खुशी नै खुशी महसुस हुन्छ । तर, जब प्रेममा बे्रकअप हुन्छ,जीवन साह्रै नै कष्टदायक बन्छ । पहिला–पहिला ब्रेकअप भयो भने आफ्नो मिल्ने साथीसंग आफ्नो पीडा पोख्ने, विरहका गीत–संगीत सुन्ने, उदास भएर रहने गरिन्थ्यो, तर आज–भोलि ब्रेकअप भयो भने सोझ सोसल मिडिया खोलेर आफ्नो सबै भडास त्यहीं पोख्न थालिएको छ ।
त्यसका लागि अति नै भावनात्मक भनाइहरु (कोटेसन) खोजि–खोजि पोस्ट गरेर त्यहाँ सबैलाई पढाउने चलन बढेको छ । भावनात्मक संवेदनालाई बुझेन सकिन्छ , तर प्रायः हामी यो क्रियाकलापबाट आफ्नै मजाक उडाइरहेका हुन्छौं र फुर्सदमा पछुताउँछौं ।
तपाईंले आफैं सोच्नुहोस् त, कोही अरुको मुटु टुक्रिएको बेलाको पोस्टहरुमा तपाईंले कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउनु हुनेछ, अनि के तपाईं स्वयंलाई त्यही स्थितमा राख्न सक्नु हुनेछ ?
ब्रेकअपपछि तपाईंलाई ठूल्ठूलो स्वरले कराउन मन लाग्छ, धेरै बेरसम्म रुन मन लाग्छ । ठिकै छ, तपाईंलाई मन लागेका ती सबै कुराहरु गर्न सक्नु हुनेछ । तर, सोसल मिडियामा केही पनि नलेख्नुहोस् अथवा कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु होस् । यदि तपाईं आफ्नो फेसबुक तथा इन्स्टाग्रँममा आफ्ना भावनाहरुलाई व्यक्त गर्न चाहिरहनु भएको छ भने केही कुरामा ध्यान दिनैपर्छ ।
तत्काल आफ्नो रिलेशनशिप स्ट्याटस परिवर्तन नगरौं
तपाईंको आफ्नो पार्टनरसंग ब्रेकअप भएको कुरा सारा संसारलाई बताइरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । तपाईंका नजिकका आफ्ना साथी–भाइ तथा नातेदारहरु लाई उक्त कुराको जानकारी त भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले फेसबुकको स्ट्याटसमार्फत तपाईंको उक्त परिवर्तनलाई तुरुन्तै व्यक्त गर्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यो तपाईंको अति नै व्यक्तिगत दुःख तथा संकट हो । तपाईंले घरको छतमा गएर कराइ–कराइ सबैलाई सुनाउने आवश्यकता पनि छैन ।
उक्त कुरालाई सबैको सामु सार्वजनिक गर्नु पर्ने कारण नै छैन । मानिसहरुलाई आफ्नै तरिकाले थाहा पाउनका लागि छाडिदिनुस् । यदि तपाईंले सोसल मिडियामा ब्रेकअप भएको जानकारी गराउनु भयो भने तपाईंका साथीभाइ तथा नातेदारहरुको फोन, म्यासेजको त कुरै छाडौं, तपाईंलाई सामान्य चिनजानको व्यक्तिले समेत विभिन्न प्रकारका अर्ती–उपदेश दिन थाल्छन् । अधिकांश व्यक्तिहरु तपाईंबाट ब्रेकअपको कारणका बारेमा थाहा पाउन चाहन्छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा तपाईं ब्रेकअपको पीडा भन्दा पनि मानिसहरुले राख्ने विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाले थप पीडित बनाउँछ । यदि ब्रेकअपको जानकारी सोसल मिडियाबाट दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले मानिसहरुलाई बिना कारण नै कुरा काट्ने अवसर समेत प्रदान गरिरहनु भएको हुनेछ ।
एक्सलाई ब्लक नगर्ने
सोसल मिडियामा आफ्ना पूर्व प्रेमि÷प्रेमिकालाई ब्लक गर्नु एउटा मूर्खतापूर्ण कदम हो । तपाईंले रिसै–रिसले त्यस्तो गरिदिनु हुन्छ, तर पछि तपाईंलाई त्यस्तो नगरे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यदि आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा अथवा अपडेटहरुमा उनको उपस्थितीले निकै गाह्रो हुन्छ भने उनलाई अनफ्रेन्डसम्म गर्न सकिनछ ।
यदि तपाईं आफ्ना एक्ससंग साथी बनिरहन चाहानु हुन्छ भने उनलाई ब्लक गुर्न अथवा अनफ्रेन्ड गर्नु ठिक होइन । यदि तपाईं सोसल मिडियामा निकै छिटो प्रतिक्रिया जनाउनु हुन्छ भने तपाईंको पार्टनरलाई ब्रेकअपले तपाईंलाई कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत तत्काल मिल्ने छ, जुन तपाईंले चाहनु भएको हुन्न । के कुरामा विश्वास गर्नु पर्छ भने आफ्ना पूर्व प्रेमी–प्रेमिका बारेमा चासो दिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव तपाईंलाई नै पर्न सक्छ ।
यदि एक पटक तपाईंको उनको बारेमा चासो राख्न थाल्नु भयो भने, त्यो रुटीन झैं बन्छ, जुन कुराको बारेमा तपाईंलाई जानकारी नै हुन्न । त्यसो भयो भने तपाईंलाई हरेक दिन उसको प्रोफाइल हेर्न मन लाग्छ, त्यसो गर्नाले तपाईं स्वयं नै दुःखी हुनु हुन्छे ।
उनको खुशीपूर्ण फोटोहरु तथा उनले साथीहरुसंग बिताएका क्षणहरुका बारेमा जानकारी पाउँदा तपाईंलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । अझ उनलाई नयाँ पार्टनरसंग देख्नु भयो भने त तपाईं झनै दुःखी बन्न सक्नु हुनेछ । त्यसैले यदि तपाईंको कसैसंग ब्रेकअप भएको छ भने उनलाई तुरुन्त बिर्सिएर आफ्नो जीवन यात्रालाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउनुमै सबैको भलाइ हुन्छ ।
नयाँ पार्टनरसंगको फोटो नराख्ने
तपाईंलाई कसैको भावनात्मक साहराको आवश्यकता परिरहेको हुन सक्छ, तर उक्त व्यक्ति त्यति चाँडो तपाईंको नयाँ पार्टनर बन्नै सक्दैन । त्यसैले उसको तस्बिर आफ्नो सोसल मिडियाको प्रोफाइलमा राख्नै हुँदैन । यसले तपाईंलाई नै समस्या पैदान गर्न सक्छ ।
त्यसो गरेर तपाईंले अञ्जानमै आफ्ना पूर्व प्रेमि÷प्रेमिकालाई दुःख दिइरहको मानिने छ । एक पटक सोच्नु होस् त, तपाईंको पूर्व प्रेमि÷प्रेमिकाले तपाईंलाई त्यस्तै गरे भने कस्तो हुन्छ ? एक जनासंग ब्रेकअप भएर अर्कोसंग सम्बन्ध गाँसिने बित्तिकै उनको तस्बिर सोसल मिडियामा राख्नाले मासिनहरुले तपाईंको चरित्रकै बारेमा समेत शंका गर्न सक्ने कुरामा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अभिनय गर्ने आवश्यकता छैन
ब्रेकअपपछि कोही पनि खुशी हुँदैन, सबैलाई दुःख नै हुन्छ । सोसल मिडियामा तपाईंले आफू खुशी छ भनेर व्यक्त गरिरहनु पर्दैन । सोसल मिडियामा मोटिभेसनल कोट अथवा माया–प्रेम र मुटु टुक्रिएका विषयसम्बन्धि कुनै पनि पोस्ट गर्नु हुँदैन ।
तपाईंका कुनै पनि साथीले तपाईंको पोस्टलाई स्क्रिनशट गरेर अन्य साथीहरुलाई पठाउने र तपाईंको मजाक उठाउने सम्भावना अत्यधिक हून्छ । त्यस्तो बेला तपाईंले यी कुनै पनि काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।
अनलाइन डेटिङ ब्रेकअपपछिको समस्याको हल होइन
ब्रेअअपपछि प्राय साथीहरुले तपाईंलाई डेटिङ साइट ज्वाइन गर्ने सल्लाह दिन सक्छन्, तर डेटिङ एप मुटु टुक्रिएपछिको उपचार होइन । त्यसले तपाईंको दुःख कम हुँदैन । ब्रेकअपपछि चिनचानै नभएका नयाँ व्यक्तिसंग कुराकानी गर्नु निकै असहज हुनेछ । त्यसको साटो ब्रेकअपपछिको केही समय त्यस्तो काम गरेर बिताउनु पर्छ, जुन काम गर्दा तपाईंलाई खुशी मिल्न सक्छ । अनलाइनखबर बाट सभार